Shan waxyaabood oo laga bartay kulankii G/Benadir iyo Puntland – Gool FM
Shan waxyaabood oo laga bartay kulankii G/Benadir iyo Puntland
Byare December 18, 2017
(Muqdisho) 18 Dis 2017. Kulankii ugu xiisaha badnaa, dabcan, ugu yaraan sidii la wada filayey, fiinaalihii oo soo hormaray dadka qaar ayaa qabaye! Ayaa galabta ka dhacay gegida Benaadir.
Puntland oo si weyn loo dhalliilsanaa qaab ciyaareedkii ay la soo gashay ololahan marka la eego is bar bar dhigga lagu sameenayey kooxdeedii wacdaraha ka dhigtay kal hore isla tartan ayaa ku dur durisay G/Benadir oo loo saadaalinayey hanashada koobkan.
Kulanka ma ahayn mid lagu seegay madaddaalo, farxad, tiiraanyo iyo maadeysi, yeelkeede ugu dambeyn waxaa qosolka dambe yeelatay Puntland oo 0-1 uga badisay kooxdii ay martida u ahayd sidaasna ku carbuunatay tikidhkeeda kama dambeynta oo ay laba sano oo taxane ah tageyso.
Ma difaacan doontaa iyo Malaga qaadi doonaa waa dood maalin kale balse shantan waxyaabood ee hoos ku xusan ayaan ka soo qishnay hardankii galabta.
1….G/Benadir waxa uu afar dhammaadka ku soo haray kulankii Galmudug…
G/Benadir waxa uu dartanka ku soo galay dar dar aad u khal khal galisay dhammaan kooxaha ka qeyb galayey iyo gaar ahaan Puntland oo difaacaneysay – hase ahaatee, kulankii ugu horreeyey ee ay Jubbaland 2-1 uga badiyeen waxaa kaarka huruudiga ah laga siiyey qaar ka mida fureyaashii safkeeda kowaad , Cabdi Majiid, Meenis iyo Habarey.
Iyaga oo ay sidaas ka warqaba ayey hadana diiwaanka garsoorka galeen kulankii xigay ee ay 3-0 ku karbaasheen Galmudug taas oo ay micneheedu ahayd in ay seegayaan ciyaarta xigta oo ah afar dhammaadka – taas waxa ay fursad dahabi ah siisay koox walba oo ay foodda ku dari kartay heerkaas kuma sii jirto Puntland oo difaacaneysa aadna ay isu xifaaliyaan una dheertahay waayo aragnimo taas oo ay muujiyeen sida ay uga faa’ideysteen manta.
2…..Puntland oo masraxa la sara kacday (Puntland rose to the the occasion)
Haddii meesha laga saaray in ay difaacan karto koobkii ay kal hore sida xaragada leh u qaaday maxaa keenay qaab ciyaareedkeedii loo wada riyaaqay maanta? Caadiyan kulamada adag laguma qiimeeyo qaab ciyaareedka ay ku jirto kooxda gaar ahaan marka ay soo gaarto heerar xasaasi ah ama wajahayso dhinac ay is xifaaliyaan…muddooyinkan dambe kulamada ay is wajahayaan Benadir iyo Puntland waxa uu noqday mid ka xiiso iyo xamaasad badan kuwa kale taas oo keeneysa in mid walba sare ula kacdo masraxa.
3….Benaadir cadaadiskii saarnaa ayey lugaha ku cuslaadeen!
Marka aad tahay kuwa ugu cad cad, ku dheeleysa gurigeeda oo ay kumanaan taageerehaaga ah ku soo daawasho tagaan cadaadisku ma yara…Benadir sanadkii labaad oo is xiga ayey caguhu ku cuslaadeen sababo la xiriira SHAABADDA saadaasha ah ee lagu dhejiyo iyo mucaashaqiinta Koonis dhigaha xittaa qabsada!
4…..Jiilka dahabka ah ee Puntland wali dhinacooda dhulka laguma dhigin gegida Benaadir
umana muuqdaan mustaqbalka dhaw!…Ololihii labaad oo is xiga Puntland loogama badin Muqdisho kulan ayaa ka xiga in ay ka dhiggaan 8 kulan oo is xiga oo ay Koonis ku dheelen in aan looga badin.
5…Macallin Saalax oo kaarto lumay……
Kaartiistaha G/Benadir oo khidado cajiib ah ku soo maray Jubbaland iyo Galmudug ayaa ku fashilmay kulankii maanta…Sida ka muuqatay shaxdiisa waxa uu ku soo galay qaab difaaceed oo ay sabab u ahayd xiddigihii ka maqnaa balse waxa uu isu bedelay weerar mar BAHDII lagala tagay oo ay Puntland fahantay in aysan ILKO lahayn kooxdiisa…waxa ay ahayd in uu sidii hore ku joogo oo uu sugo xiddiggaha Puntland waqtiga dheeriga ah oo uu markaas is bedel la yimaaddo.
Puntland oo ballanqaadkii ugu heerka sarreeyey ka heshay ganacsato....(Muxuu yahay?)
Kulamada Maanta la ciyaarayo EFL Cup iyo saacdaha ay soo galayaan